Lionel Messi oo ugu hanjabaya Kooxda Paris Saint-Germain inuu ka tagayo xagaagan haddii… – Gool FM
Lionel Messi oo ugu hanjabaya Kooxda Paris Saint-Germain inuu ka tagayo xagaagan haddii…
Haaruun January 8, 2022
(Paris) 08 Jan 2022. Lionel Messi ayaa laga yaabaa inuu isku dayo inuu ku qasbo inuu ka tago Paris Saint-Germain xagaagan haddii ay ku guuldareystaan ​​inay u soo baxaan ​​Champions League, sida laga soo xigtay ciyaaryahankii hore ee Barcelona Francisco José Carrasco.
Laacibka todobada jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ayaa si weyn ugu dhibtooday inuu la qabsado garoonka Parc des Princes, isagoo dhaliyay hal gool 11 kulan oo uu saftay horyaalka Ligue 1, sidoo kale wuxuu caawiyay shan gool oo kale.
Messi ayaa loo diiwaan geliyay shan gool shan kulan oo uu ciyaaray Champions League, inkastoo kooxda Mauricio Pochettino ay durba ugu cadcad inay dib u hanato horyaalka Ligue 1.
Si kastaba ha ahaatee, Carrasco ayaa ku andacoonaya in ku guul dareysiga u soo bixitaanka Champions League ee PSG ay keeni karto in Messi uu dib u fikiro, isagoo u sheegay Warsidaha El Chiringuito: “Messi mar walba waa uu tabi doonaa qaab ciyaareedkii uu ku haystay Barcelona.
“Haddii uu ku guulaysto taasi waxa ay la macno tahay in uu ku guulaysto Champions league waana uu sii joogi karaa sanad kale, haddii ay PSG ku guulaysan waydo Champions League sanadkan waxa ay noqon doontaa inay sugto waqti dheer, laakiin heer shakhsi ahaan wuu gartay waxa uu sameeyey inay khalad ahayd.”
PSG ayaa wajihi doonta Real Madrid wareegga 16-ka Champions League, wiilashaTababare Pochettino ayaana kulankooda soo aaddan haatan waxa ay la leeyihiin Kooxda Lyon habeen dambe, waxaan ciyaar qeyb ka ah horyaalka Ligue 1.
Messi oo qandaraaska uu ku joogo Caasimadda Faransiiska uu ku eg yahay ilaa 2023 ayaa leh ikhtiyaar uu sanad kale ku kordhin karo heshiiskaas, waxaana la filayaa inuu taam u noqdo kulanka habeen dambe kaddib markii uu ka soo laabtay Korona Fayras oo laga waayey.
Xavi oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha Kooxda Barcelona uga qeyb galaya kulanka caawa ee Granada… (Yaa ka maqan yaase ku soo baxay?)
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Granada iyo Barcelona ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey